Vinaya Kasajoo’s जोन, जुठे र ड्राइभर – nepali bytes
March 14, 2014 March 21, 2016 nepali bytes	Comments
जुठेकी आमा विदेशी डाक्टरकहाँ काम गर्थिन् । जुठे आमासँग कहिलेकाहीँ डाक्टरको घरमा जान्थ्यो । डाक्टरको तीन जनाको परिवार थियो । डाक्टर, उनकी श्रीमती र छोरा । छोराको नाम जोन थियो । जुठेलाई जोनको मात्रै नाम थाहा थियो, किनकि उसलाई जोनले कहिलेकाहीँ खेल्न बोलाउँथ्यो ।
जोनसँग धेरै खेलौना थिए । खेलौनाहरूमध्ये उसले खरायो, कुकुर, बिरालो, चराजस्ता खेलौनाहरू त चिनेको थियो तर हिऊँमा हुने भालु, डाइनासोर, ह्वेलजस्ता जीवहरूलाई उसले कहिल्यै देखेको र चिनेको थिएन । जोनसँग किसिमकिसिमका खेलौना मोटरहरू पनि थिए । ती मोटरहरूमध्ये माल ओसार्ने ट्रक, मानिस ओसार्ने बस र साना जीप र कारहरू त जुठेले देखेको थियो तर माटो खन्ने र ओसार्ने र कम्मरपेटीजस्तो पांग्रा भएका मोटरहरू उसले कहिल्यै देखेको थिएन । कुनैकुनै मोटर दुईतीन वटा जोडेर एउटा बनाउन पनि सकिन्थ्यो । जुठेलाई ती मोटरहरू निक्कै मनपर्थे ।
जोनसँग मोटरसाइकलहरू पनि थिए । कुनै मोटरसाइकल दम दिएपछि बेस्सरी कुद्थे । कुनैमा ड्राइभर बसेको थियो । एउटा कालो रंगको मोटरसाइकलमा रातो फलामे लुगा र फलामे टोप लाएको ड्राइभर बसेको थियो । त्यो मोटरसाइल दम दिएपछि धेरै बेरसम्म कोठामा घुमिरहन्थ्यो । जोनलाई त्यो मोटरसाइकल मन पर्थ्यो । जुठे पनि जोनले त्यो मोटरसाइकल चलाउन थालेपछि दंग परेर हेरिरहन्थ्यो ।
कहिले काहीँ धेरै दम दिँदा मोटरसाइकलहरू बेस्सरी कुदेर बारीमा पुग्थे । जुठेले बारीबाट मोटरसाइकल खोजेर ल्याइदिन्थ्यो । जोनसँग खेल्दा जुठेलाई रमाइलो लाग्थ्यो । त्यसमाथि जोनले उसलाई पुराना खेलौना मोटरहरू पनि बेलाबेलामा दिने गर्थ्यो । जोनको संगतले जुठेले अंग्रेजी भाषाका केही शब्द र वाक्य पनि बोल्न सिकेको थियो ।
एक दिन जोनले आफूसँग भएका सबै मोटरसाइकलमा दम दिएर एकैचोटी कुदाउन खोज्यो । कुन मोटरसाइलले जित्छ भनेर उसले जुठेसँग बाजी थाप्न चाहृयो । तर आफू हारेको खण्डमा जोनलाई दिने कुरा जुठेसँग केही पनि थिएन । जोनले भन्यो, तिमीले भनेको मोटरसाइकलले जित्यो भने म त्यो मोटरसाइकल तिमीलाई नै दिन्छु । तर मैले भनेको मोटरसाइकलले जित्यो भने तिमीले बाँदरजस्तै गरी उफ्रँदै बारीको अम्बाको रुखमा चढेर अम्बा टिप्नुपर्छ ।
जुठेले जोनको कुरा मंजुर गर्यो । जोन र जुठेले एकएक वटा मोटरसाइकल एकै चोटी कुदाउँदै जित्नेलाई एकातिर र हार्नेलाई अर्कोतिर राख्दै गए । सबै मोटरसाइकल कुदाइसकेपछि उनीहरूले जित्नेजित्नेहरूको जोडा कुदाए र आखिरमा दुइटा जितुवा निस्के । एउटामा रातो लुगा लाएको ड्राइभर थियो भने अर्कोमा निलो लुगा लाएको ड्राइभर थियो ।
जोनले रातो लुगा लाएको ड्राइभर भएको मोटरसाइकल रोजेपछि जुठेले अर्को रोज्यो । दुबै जनाले ती दुइटा मोटरसाइकलमा पूरा दम भरे । अनि कुदाउने तयारीमा लागे ।
एक, दुई, तीन… दुबैले आआफ्नो मोटरसाइकललाई हातले जोडले अगाडि घचेटे । जोनले घचेटेको मोटरसाइकल चिप्लेर जोडले हुत्तिएर ढोका बाहिर गयो । अर्को मोटरसाइकल कोठामा वरिपरि कुदेर दम सकिएपछि पल्ट्यो ।
कोठा बाहिर हुत्तिएको मोटरसाइकल लिन जुठे बाहिर गयो । तर घेरै बेरसम्म जुठे फर्केन । जोनले उसलाई बोलायो । तर जुठेले जवाफ नफर्काएपछि ऊ बाहिर निस्क्यो । जुठे आगनमा थिएन । ऊ त पर झाङमा निहुरिएर मोटरसाइकल खोजिरहेको थियो । जोन जुठेको नजिक गयो र मोटरसाइकल कहाँ छ भनेर सोध्यो । दुबै जनाले बारीमा निक्कै खोजे तर मोटरसाइकल भेटिएन ।
हराएको मोटरसाइकलको कथा त्यसैको ड्राइभरको मुखबाट सुन्नुस् :
म जोनको उही हराएको मोटरसाइकलको ड्राइभर हुँ । मेरो नाम रोबिन हो । तर जोनले मेरो नाम बिगारेर रोबी भन्छ । खेल्न पुगेपछि जोनले मलाई खेलौनाको बाकसमा हुत्याइदिन्छ । तर जुठेले मेरो जिऊमा लागेको धुलो पुछेर मलाई जतनसँग बाकसमा राख्छ । यसैले मलाई जुठे मन पर्छ ।
त्यो दिन जोनको हातबाट हुत्तिएपछि चिप्लिएर म अलि पर पर्खालमाथि पुगेँ । जुठेले मलाई बारीमा फूलको बिरुवाको झ्यांगभित्र निक्कै खोज्यो तर उसले पर्खालमाथि हेरेन । उसले मलाई देखोस् भनेर मैले निक्कै कोसिस गरेँ । तर दम सकिएको हुनाले म बोल्न र चल्न सकिन । उसले मलाई भेटाउनै सकेन । जोनले जुठेले नै मलाई लुकाएको छ भन्ने आरोप लगायो । जुठेले अंध्यारो मुख लाउनेबाहेक अरु केही भन्नसकेन ।
म पर्खालमाथि बसेर कहिले मलाई जोन वा जुठेले देख्ला र मलाई लिन आउला भनेर जोनको घरतिर हेरिरहन्थेँ । तर म हराएको भोलिपल्टदेखि जोनको घरमा जुठे आएन । जुठेकी आमा पनि काममा आएको देखिन । जोन पनि घरभित्रै खेलिरहन्थ्यो । मलाई निक्कै पीर पर्यो । दिउँसो मलाई घामले पोल्थ्यो भने राती चिसोले कठ्यांग्रिन्थेँ । यसरी धेरै दिन बिते ।
एक दिन एउटा कौवा आयो र मलाई के थानेर हो कुन्नी थुङ्न थाल्यो । संयोगले जोनले झ्यालबाट हेरेको बेला पर्यो । कौवाले मलाई थुङेको देखेर जोन हत्तपत्त म भएको ठाउँमा आयो । उसले पर्खालमाथि चढेर मलाई भेट्टाउन खोज्यो तर सकेन । अनि उसले आफ्नी आमालाई बोलायो । आमा छोरा मिलेर भरेंड राखेर मलाई पर्खालबाट निकाले । जोनले माया गरेर मलाई पुछेर सफा गर्यो र घरभित्र लग्यो । अनि ऊ मसँग खेल्नथाल्यो ।
जोनसँग खेल्न पाएकोमा मलाई खुशी लाग्यो । जोन पनि खुशी थियो । धेरै दिनपछि जोन खुशी भएर खेलेको देखेर उसकी आमा पनि दंग भइन् । आमाले जोनको लागि खिर पकाइन् । आमाले ल्याइदिएको खिर खानै लागेको बेलामा उसको हात अचानक रोकियो । उसले आमासँग सोध्यो, “आमा जुठे छैन ! म एक्लैले कसरी खाने ? उ यहाँ भएको भए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो । उसलाई बोलाइदिनुस् न आमा ।”
जोनका कुरा सुनेर मलाई पनि खुशी लाग्यो । आखिरमा उसले आफ्नो साथीलाई बिर्सेको रहेनछ । जुठेलाई बित्थामा दोष लाएकोमा उनीहरूले पछुताउ गरे र माफी मागे ।
भोलिपल्टदेखि जुठेकी आमा जोनको घरमा पहिलेझैँ काममा आउन थालिन् र उनीसँगै जुठे पनि जोनसँग खेल्न आउन थाल्यो । मलाई अब जुठे र जोन दुबैले उत्तिकै माया गर्छन् ।
Image source: Kasajoo.com
books by Vinaya Kasajoo books for Nepali children children story nepali nepali children's stories stories by Vinaya Kasajoo stories for Nepali children Vinaya Kasajoo children stories Vinaya Kasajoo's writings writers of Nepali children books